जग्गाको लालपुर्जा साथमा छ भनेर ढुुक्क नबस्नुहोला, भु-माफियाहरुले सजिलै अरुको नाममा यसरी पास गर्छन् ! « News24 : Premium News Channel
जग्गाको लालपुर्जा साथमा छ भनेर ढुुक्क नबस्नुहोला, भु-माफियाहरुले सजिलै अरुको नाममा यसरी पास गर्छन् !
सक्कली जग्गा धनी चन्दन कृष्ण कायस्थ आफ्नो जग्गा अन्य व्यक्तिले नापजाँच गर्न लागेको थाहा पाएर मालपोत कार्यालयमा बुझ्न जाँदा पास भैसकेको थाहा पाए ।
मालपोत कार्यालयमा २४ लाख मात्रै मुल्य देखाइएपनि करिब ६ करोडमा यो जग्गा किनबेच भएको रहेछ । प्रदीप प्र्र्रसाद गौतमले काठमाडौंका कृष्ण देवकोटा र रामेछापका धुव्र प्रसाद भट्राईलाई मालपोतमा रहेको श्रेस्ता देखाई आँफु चन्दन कृष्ण कायस्थको वारेस भन्दै बेचेका रहेछन् ।
प्रदिप प्रसाद गौतमले आँफुलाई वास्तविक चन्दन कुमार कायस्थले नै वारेस दिएको दाबी गर्दै आएका छन्, तर उनले देखाएको चन्दन कृष्ण कायस्ताको नागरिकता र वास्तविक चन्दन कृष्ण कायस्थको नागरिकता नम्बर एउटै छ । तर वारेसले भनेका चन्दनकृष्ण कायस्थ भने सम्पर्कविहिन छन् ।
सक्कली चन्दन कृष्ण कायस्थसँग मालपोत कार्यालयले २०६५ सालमा दिएको लालपुर्जा छ । तर मालपोत कार्यालय रहने मुख्य श्रेस्तामा उनकै विवरणमा अर्कै व्यक्तिको फोटो छ । मालपोत कार्यालयका कर्मचारीका मिलेमतो विना यो सम्भव थिएन ।
अहिले वास्तविक जग्गा धनी अदालती प्रक्रियामा गएका छन् भने, नक्कली जग्गा धनी सम्पर्कमा छ्रैनन् । तर नक्कली जग्गा धनीका वारेस प्रदीप प्रसाद गौतम तथा जग्गा खरिदकर्ता कृष्ण देवकोटा र धुव्र प्रसाद भट्राई प्रहरी थुनामा छन् ।